VIETNAMESE ma LUUG adag bay tahay in wax la barto? - The Holy Land ee Daraasadaha Fiyatnaam
VIETNAMESE ma LUUG adag bay tahay in wax la barto?
The Xarfaha Vietnamese, macno ahaan loo yaqaan “qoraalka luqadda qaranka,, Waa habka qoraalka casriga ah ee Luqada vietnam. Waa inaan qirno ku dhawaaqida Vietnam inay noqon karto mid dhib badan oo dhib badan maadaama ay leedahay lix cod iyo tirooyin dhawaaqyo shaqal qalaad ah oo aan ku jirin Ingiriisiga. Si kastaba ha noqotee, i aamin, luuqadani aad ayey uga fududdahay barashada sida aad moodeyso. Waa kuwan sababaha qaarkood oo gabi ahaanba beddeli doona fikirkaaga. Haddii aad doonayso inaad u baxdo booqasho fiitnaam oo maxalli ah, way fiican tahay inaad tiraahdo wax fudud Xukummada Vietnamese naftaada, sax?
Isku ekaanshaha Fiyatnaamiis & Ingiriis
In kasta oo ay jiraan waxoogaa kala duwanaan yar, labadan luuqadood wali waxay leeyihiin wax isla wadaagaan. Hoos waxaa ku yaal shaxda labada shibannada iyo shaqalaha, taas oo muujineysa Xarfaha Vietnamese, iyo tusaalooyin sida ay xarfahaasi u dhawaaqaan haddii aad eray u qorto.
Fiitnaam & Ingiriis isku ekaansho (Xigasho: govietnam.tours.com)
Ma rumeysan tahay taas Xiisada Vietnamese ma wax fudud ayay shisheeyuhu laba daqiiqo ku baran karaan? Kaliya fiirso tilmaantan: Teendhooyinka Fiyatnaamiiska ee fudud.
sẽ xilligii hore
waagii hore, oo ka dambeeyay “đã”
hadda, waqtigan xaadirka ah
ugu dhakhsaha badan, mustaqbalka dhow
(Waxaa jira qaar kale, laakiin lixdaani waxay kugu taageeri karaan xaaladaha oo dhan.)
Aynu qaadanno fal-aasaaska “ội bộ"(in cagta lagu socdo) tusaale ahaan, oo ku dheji mid ka mid ah lixdaan eray ee caanka ah hortiisa:
Tôi .i bộ tới trường
Tôi ã ội bộ tới trường
Tôi sẽ ội bộ tới trường Waxaan u lugeeyaa iskuulka
Waxaan u socday dugsiga
Kaliya waxaan u lugeeyey iskuulka, dhawaan dugsiga ayaan u lugeynayay
Waxaan u lugeynayaa iskuulka (haatan)
Waxaan u lugeynayaa Iskuulka, Waxaan kusii socdaa iskuulka
Waxaan u lugayn doonaa dugsiga
Shirkadda dalxiiska dugsiga = Công ty tổ chức tour du lyoch trường hayac. Hagaagsan! Adigu hadda waad awoodaa inaad naftaada ku muujiso gudaha Vietnamese! Waa cadaalad fudud, sax? Inbadan Booqashada dugsiga Vietnam waxay bixiyaan barashada luqadda iyo dhaqanka.
Farqiga u dhexeeya Fiyatnaamiis & Ingiriis
Dheh Maya Foomka Wadajirka ah ee Nooca Vietnamese
Hal kalluun iyo laba kalluun, shelf laakiin shelf qaar, hal bakteeriya, iyo tirooyin bakteeriya ah. Runtii waa wax aad looga naxo ah kuwa wax barta qaabab aan caadi ahayn oo magacyo badan oo Ingiriis ah. Taas bedelkeeda, nasiib wanaag, shisheeyuhu wuu ka takhalusi karaa dhibaatadan aan loo baahnayn tan iyo Vietnamese malahan wax jamac ah. Si kale haddii loo dhigo, the keli iyo noocyo badan oo magacyada waa isku mid! Haddii aad rabto inaad si macno leh u qeexdo macnaha iyo si cad, kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku darto quantifiers like “mid ka mid"Ama"qaar ka mid ahErayga hortiisa. Waayo tusaale ahaan, "waan ka xumahay"(shelf) iyo "một vài giá”armaajo qaar).
Luuqada Fiyatnaamiisku Ma Leedahay Bilaash
Waa la arki karaa taas Vietnamese leeyahay jinsiga naxwe ahaaneed majiro. Hadaad waligaa baratay faransiis ama jarmal (marka laga reebo Ingiriisiga). Hada adiga waa iloobi karaa ku saabsan fikradda ah “lab"Ama"haweeney"Erayada," taas oo ka dhigaysa safarkaaga barashada Fiyatnaamiiska in badan aad u fudud.
Xigasho: Tag Vietnam Tours.
Qoraalka farta ah, qoraalka geesinimada leh iyo sawirada sepia waxaa dejiyay Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com
(Booqday jeer 3,844, booqashooyinka 6 maanta)
Views Views: 2,481
← LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Ajaanibta - Meelaha Fiyatnaamiis - Qeybta 4aad
Lý Toét, Xã Xệ PORTRAITS →
Lý Toét ee Magaalada: Shuruudda Casriga ah ee 1930-kii Fiyatnaam - Qaybta 1
Comments Off on Lý Toét ee Magaalada: Imaatinka Shuruudaha Casriga ee 1930-kii Vietnam - Qaybta 1
Booqashada Maanta: 247
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,168
Guud ahaan Wadarta: 286,063